Xoogga Dalka waa Laf dhabarka qaranimada Soomaaliya – Radio Muqdisho
Xoogga Dalka waa Laf dhabarka qaranimada Soomaaliya
Dhawaan waxaa dalka looga dabaaldagi doonaa xuska sanadguurada 58aad ee ciidanka Xoogga dalka Soomaaliyeed oo ah tiir dhexaadka qarnimada dalka
Aasaaskii Ciidanka Xoogga dalka:-
Waxaa la aas-aasay 12kii-April 1960kii oo waqtigan laga joogo muddo 58-sanadood waxa uuna ka kooban yahay afar talis oo kala ah: ciidanka dhulka, ciidanka cirka, ciidanka badda difaaca xeebaha iyo ciidanka difaaca cirka.
Ugu horayntii markii la yagleelayay ciidanka Xoogga dalka waxaa lagu aasaasay sideed horimood.Sideedaasi horimood ,waxaana taliyihii ugu horeeyay noqday Gen Daauud CabdulleXirsi , sidoo kale waxaa abaanduulaha Xoogga Dalka loo magcaabay Gen Maxamed Siyaad Barre.
Ciidanka xoogga dalka wuxuu soo maray marxalado kala duwan Sanadkii 1960-kii ilaa 1969kii waqtigaas oo ay dalka maamulayeen dowladihii rayidka ahaa wuxuu ciidanku ku jiray marxalad dhismo iyo koboc , hadana ayadoo taasi ay jirto ayay guulo taariikhi ka gaareen dagaalkii ay Xoogga dalka soomaaliyeed la galeen ciidamadii Ethopia Sanadkii 1964-kii.
1969kii-ilaa iyo Sanadkii 1990kii oo ahayd Marxaladii labaad ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed dalkana ay ka jirtay dowladii milatariga ahayd ee uu hoggaanka u ahaa S/Gaas Maxamed Siyaad Barre, xilligan ayuu Ciidankii Xoogga Dalka Soomaaliyeed si buuxda u hanaqaaday,Waxaa la balaariyay Dhismihii Ciidanka iyo hoggaamadiisii kala duwanaa sida Ciidanak Dhulka,cirka,Difaaca cirka iyo Ciidanka Badda iyo difaaca Xeebaha sidoo kale waxaa laballaariyay Qeybihii iyoTalisyadii Ciidanka Xoogga Dalka Soomaaliyeed ee Gobolada Dalka kuwaasoo xarumo ku lahaa magaalooyinka Muqdisho, Dhuusamareeb Garoowe ,Hargeysa, Burco iyo talisyadii Kismaayo iyo Baydhabo.
Xilligii dowladdii kacaanka ciidamada Xoogga dalka waxay ka gaareen xagga dhismaha iyo farsamada heer aad u sareeya iyagoo ka soo qayb qaatay howlgallo nabad ilaalin ah oo ay ka soo fuliyeen dalal ka tirsan qaarada afrika oo ay ka mid tahay Ugandha, taasi oo horseeday in loogu yeero Libaaxyada Africa.
Ciidamada Xoogga Dalka Soomaaliyeed waxay mar labaad dagaal la galeen ciidamadii Ethiopia Sanadkii 1977kii, kaasi oo reebay raad taariikhi ah oo lama filan ku noqday dalal badan oo caalamka ka mid ah gaar ahaan quwadihii ugu waa weynaa dunida sida Gashaanbuurtii Nato iyo Waarso oo ay kala hoggaaminayeen dalalka Mareykanka iyo dalkii horay loo oran jiray Midowga Soofiyeeti.
Waxaa ciidamadii ugu horeeyay ee Soomaaliya yeelato laga kala keenay labadii qeybood ee dalka ee ka xoroobay gumeystayaashi Ingriiska iyo Talyaaniga.
1976 waqtigaas oo ahayd hal sano ka hor dagaalkii 77 waxaa lagu tilmaami karaa xilligii uu ugu itaalka waynaa C.X.D wuxuuna ka koobnaa
Ciidanka Cirka dayaaradaha Soomaaliya waxay ahaayeen 52 dayaaradood, 24 ka mid ah waxay ahaayeen Miiga 21
Qaybaha ciidanka Xooga Dalka Soomaaliya sida qeybta 60-aad ee magaalada Baydhabo, qeybta 21-aad ee magaalada Dhusamareeb, iyo qeybta 26-aad ee magaalada Hargeeysa.
Ciidanka Bada saldhiyadooda waxay ku yaaleen magaalooyinka Muqdisho , Kismayo iyo Berbera.
1991dii oo ahayd markii ay dhacday dowladdii dalka ka jirtay waxaa burburay tiirarkii muhiimka u ahaa qaranimada sida kii ciidamadii Xoogga dalka waxayna taasi horseeday qaran jabkii nagu dhacay,dowlad la,aantii dalku galay waxay keentay in xubnihii ciidanka ay kala daataan kuna milmaan shacbiga.
Nasiib wanaag waxaa sanadahan danbe dib u bilawday qorshayaal dib loogu yagleelayo Ciidamadii qaranka ee wehelka u noqon lahaa dalkaan iyo dadkiisa mudada dheer Baylahda ahaa.
Dadaalka ugu xooggan waxaa wada madaxwaynaha J.F.S md. max’ed C/llaahi farmaajo oo shacbigiisu waxyaabaha ay kalsoonida ku siiyeen ay ka mid tahay niyad wanaagga uu u hayo dib u soo noolaynta iyo tayaynta Ciidamadii Xoogga dalka kuwaasi oo ah Tiir dhexaadkii qaranimada ee soo celin lahaa Sharaftii iyo magacii aan dunida ku lahayn.
Munaasabadda 12-ka April ee sanadkan 2018ka oo ah sanadguuradii 58aad ee ka soo wareegtay aas aaska Ciidanka Xooga Dalka Soomaaliya, waxay ku soo beegantay xilli Ciidanka Xoogga dalka Soomaaliyeed uu ku tallaabsaday horumarro dhinacyo badan leh, islamarkaana ay socdaan qorshayaal kor loogu qaadayo Tayada iyo hoggaan wanaagga Ciidanka xoogga dalka
Dadaalada jira waxaa hormuud ka ah Madaxwaynaha J.F.S md. Max’ed C/llaahi Farmaajo oo Xafiiskiisa labaad ee shaqo maalmeedkiisa ka samaystay Xarunta wasaaradda gaashaandhigga, si uu uga mira dhaliyo ballan qaadkiisii ahaa dhismo ciidan qaran oo gudan kara waajibkiisa isla markaana hela xuquuqiisa.
Maxkamada sare ee CQ oo ku raacday xukunkii dilka ahaa ee horay Maxkamada darajada 1-aad ugu xukuntay Ex-G/Sare C/naasir Xoosh Maxamed